Umkhiqizi kanye neFektri engu-2020 ye-Atex Led Explosion Proof Best kanye neFektri | UTaiyi
Imodeli TY / SLED701
Izinto zeShell ingxubevange ye-aluminium
Umthombo Wokukhanya Ama-chip angenisiwe we-LED
Kulinganiswe ngo Voltage DC3.7V
Usayizi φ48 * 170MM
Umthombo wokukhanya usebenzisa i-LED yokukhanya okuphezulu okungenisiwe, okonga amandla nokusebenza kahle okuphezulu. Ibanga elisebenzayo le-irradiation lohlobo A lingafinyelela ngaphezu kwamamitha angama-250, futhi ukukhanya okuqinile nokukhanya okubuthakathaka kungashintshwa ngokukhululekile.
Idizayini egcwele uphawu, engenamanzi kufika kumitha elilodwa Ibhethri lisebenzisa umthamo webhethri we-lithium onobungani bemvelo obunempilo ende futhi nezinga eliphansi lokuzikhipha.
Igobolondo linokwelashwa okujulile okulwa nama-skid, okulula futhi okuhle; ngaphezu kokubanjwa ngesandla, ungakhetha futhi ukuphatha imisila yenkomo noma ihlombe lentambo ende.
Ukushaja, ukukhipha, nokuqhubeka kwamanje kokulawula ukulawula okuhlakaniphile kwe-chip, ukuvikelwa okuningi, okuphephile nokusebenzayo.
Ibhethri elisha noma ibhethri elingakaze lisetshenziswe isikhathi eside kungenzeka lingasebenzi ngokugcwele ngenxa yento esebenzayo. Ngokuvamile, imijikelezo emibili noma emithathu yamandla aphansi wamanje (0.1C) akhokhisa futhi akhiphe ukwelashwa ayadingeka ngaphambi kokusetshenziswa ukufinyelela umthamo wokuphakama. Amabhethri angasetshenziswanga isikhathi eside kufanele agcinwe esimweni esikhokhiswayo. Ngokuvamile, zingagcinwa ngemuva kokushaja kwangaphambili u-50% kuye ku-100% wamandla. Kunconywa ukuthi ushaje ibhethri kanye ezinyangeni ezintathu ukubuyisa umthamo ogcwele.
Langaphambilini Isitsha Esikhokhelwayo Esiphathekayo Esiphathekayo Sokufuna Ukukhanya Nesibuthe
Olandelayo: Ukushintshwa kwe-20W 40W IP65 Tri-proof LED Light
Esha futhi ephathekayo Warehouse Explosion-p ...